Somaliland Guardian: CODKAAGA KU CIIDAMI-4: WAA DHARAARTII MUWAADINKA
Waa dharaartii balanka, waa ayaan shacbigu midida daabkeeda hayo, waa maalintaad masiirka iyo mustaqbalka Soomaliland ee siyaasadeed aad ka go'aan gaadhi lahayd. Waa maalin codka muwaadinku siman yahay, aqoonyahan iyo qof aan wax qorin, rag iyo dumar, waayeel iyo dhalinyaro, maal-qabeen iyo danyare, reer magaal iyo reer miyi. Sidoo kale waxa sharaxan rag iyo dumar isagu jira dhalinyaro iyo waayeel, khibrad iyo aqoonna aad u kala durugsan. Wey u siman yihiin oo sharcibaa u fasaxay tartanka iyo doorashada.
Taladu waxay ka go'daa codbixiyaha ooy tahay inuu qiimeeyo oo uu si wacan uga baaraandego aqoonta, khibradda iyo akhlaaqda cidda uu dooranaayo. Waa shaqaale uu diranaayo. Sidaas awgeed waxa loo bahan yahay inaad ciddaad hawsha u diranayso oo dhan walba ka eegto.
Waxa hubaal ah in xisbiga KULMIYE yahay kan keliya ee tijaabo kasta ka soo baxay mid guul-darro iyo mid guul ah, mid mucaarid iyo mid muxaafid. Waxaynu ognay in labadii xisbi ee kale midna meesha ka baxay waa UDUB'e, kan kalena waa UCID oo u xuub-siibatay New UCID. Taasi waxay ka dhigeysaa KULMIYE xisbiga keliye ee horumar siyaasadeed gaadhay, dhaliyeyna dimuquraadiyad heerka ugu sareeya, waa guusha iyagoo mucaarid Afrikaan ah ku guuleysta doorashada Madaxtooyada. Waxa xigtay inay iyagoo labada xisbi mucaarid UDUB iyo UCID diidan yihiin si badheedh ah uu u furay tartanka Ururrada ee hadda socda. Dan xisbi ugumey jirin laakiin waxay u liqeen danta guud iyo oofinta balan-qaadkii ay ummadda u galeen. Waana mid muwaadin kaga baahan inaad qiimeyso.
Posted By Blogger to SAMOTALIS at 11/26/2012 05:27:00 PM
Posted by Ahmed Hassan Arwo at 9:33 AM